Ahịa Njem Arabian: Ụdị njem nlegharị anya nke ụkpụrụ na-ewu ewu ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ahịa Njem Arabian: Ụdị njem nlegharị anya nke ụkpụrụ na-ewu ewu ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Ahia njem ndi Arabian Dubai
RX Global, onye na-ahazi ahịa njem njem nke Arabian (ATM), ekpughere na 2022 nwere ike ịhụ mweghachi nke ndị njem mara mma, na-eso nkọwa ọ natara n'aka ndị nnọchi anya na-aga 2021 n'onwe ya na nzukọ ọmụmụ ihe gbasara njem nlegharị anya.
Nzaghachi sitere na nzukọ ọmụmụ ihe nlegharị anya nke 2021 chọpụtara usoro ahịa nwere ike na nkwado yana mmata ọha na eze n'isi ntọala ya.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ elu, na ebe ntụrụndụ ga-adị ndụ ma na-eku ume ụkpụrụ ha.
Ndepụta Google ọhụrụ ga-eme ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ chọpụta nzere gburugburu ha.
"Nzaghachi anyị natara, enyerela anyị aka ịmata otu profaịlụ nke onye njem, nke na-achọsi ike ugbu a ụdị ụkpụrụ omume ịgbaso ma chọọ ịhụ ihe akaebe pụtara ìhè nke ika ahụ na-eme ihe ọ na-ekwu na ọ bụ.
"Nke a nwere ike kwụ ọtọ na-egosi nchikota nke njirimara ndị a na-akpọ ndị njem n'èzí, ịdị mma, ndị njem nlegharị anya, ndị na-akwagharị dijitalụ na 'ọrụ', ndị njem nlegharị anya na ndị njem maara ọha na eze," kwuru. Ọnye na -bụ Danielle Curtis?, Ihe ngosi Director ME, Ahia njem ndi Arabia.
"N'ezie, anyị ga-egosipụta usoro a na-apụta n'oge mmemme ngwakọ 2022 nke na-eme ndụ na mmadụ na Dubai World Trade Center na 8-11 Mee 2022, yana mbipụta mebere na 17 na 18 Mee 2022.
"A ka na-emepụta mmemme ogbako anyị maka ATM 2022 mana anyị enweela nnọkọ ga-eleba anya n'ihe ịma aka ndị ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ndị ọzọ na-aga, n'ọdịnihu dị nso, dị ka ahụike na nchekwa, nkà na ụzụ na nha anya na ahụike, agụmakwụkwọ, na akụnụba. ohere,” Curtis kwukwara.
N'oge ọmụmụ ihe gbasara ụgbọ elu anyị na ATM 2021, ndị ọkachamara chere na ọ ga-abụ ezumike ezumike dị mkpirikpi, ịkwado ndị na-arụ ọrụ ọnụ ala ga-abụ ndị mbụ gbakere n'ihi ọrịa ahụ. Ọ bụ ezie na nke ahụ ka nwere ike ịdị ka ọ dị, akụkụ ahịa a na-apụta agaghị ejedebe n'otu ebe, ọ ga-abụ na ọ ga-ahọrọ ebe ị ga-ebuga ogologo oge ma nọrọ ogologo oge, na-ejikọta ya na oge ọrụ.
"Akara ala ebe a yiri nnọọ. Ndị njem nlegharị anya a ka ga-achọ ịhụ ụdị agbadoro maka ahụike na nchekwa yana ihe akaebe pụtara ìhè nke atụmatụ na-adigide dị ka asambodo na ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe ya, "Curtis kwuru.
Iji mesie ọchịchọ ahụ ike, dị ka data ahịa na Statista si kwuo, 81% nke ndị okenye 29,349 nyochara na mbido afọ a, n'ofe mba 30 gosipụtara na ha ga-achọ ịnọ na ebe ntụrụndụ na-adigide, opekata mpe otu ugboro n'ime ọnwa iri na abụọ n'ihu. Afọ ise gara aga, naanị 12% nke ndị zara ajụjụ, mere otu nkwupụta ahụ.
N'ezie, Google chọpụtara na okwu ọchụchọ "ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-acha akwụkwọ ndụ," amụbaala okpukpu anọ n'ime ọnwa 18 gara aga n'ihe gbasara ụda. Yabụ, iji nyere ndị njem nlegharị anya aka, Google ga-enyezi ụlọ oriri na nkwari akụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'akụkụ aha ha n'oge a na-achọgharị oge niile. Ọ ga-agbakwunye nkọwa gbasara amụma nkwado na usoro na mmemme nke ụlọ ahụ. Iji ruo eruo, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-enwerịrị ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi nyochaa ihe ha rụpụtara.
"Nke a ga-enyekwu nghọta maka ndị ọbịa nwere ike inye aka na-akwụ ụgwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ezi mmezu gburugburu ebe obibi," Curtis kwuru.
Ugbu a n'ime afọ 29th ya na-arụ ọrụ na mmekorita ya na Dubai World Trade Center (DWTC) na Dubai's Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), ihe omume ahụ, ihe ngosi ihe ngosi na 2022 ga-agụnye, n'etiti ndị ọzọ, nzuko njedebe na-elekwasị anya na isi ahịa ahịa. Saudi, Russia, China na India.
Njem n'ihu, ihe omume zuru ụwa ọnụ maka teknụzụ njem nke na-etinye ntụpọ na teknụzụ ọhụụ, ọgbọ na-abịa maka njem na ile ọbịa, nnọkọ ndị na-azụ ahịa ATM na mmemme ịkparịta ụka n'ike, yana ARIVAL Dubai @ ATM. Site na usoro webinars nke a raara onwe ya nye na-ekpuchi ọnọdụ dị ugbu a na nke ga-eme n'ọdịnihu maka ndị na-eme njem nleta na ihe nkiri na-elekwasị anya na azụmahịa na-eto eto site na ịzụ ahịa, nkà na ụzụ, nkesa, echiche nduzi na njikọ ọkwa nchịkwa.
ATM 2022 ga-anabatakwa nzuko ogbako raara onwe ya nye na Global Stage, na-ekpuchi ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, njem nlegharị anya egwuregwu, njem nlegharị anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ pụrụ iche. Otu Global Business Travel Association (GBTA), njem azụmahịa mbụ nke ụwa na nzukọ azụmaahịa, ga-esokwa ọzọ na ATM. GBTA ga-ebuga ọdịnaya njem azụmahịa kachasị ọhụrụ, nyocha na agụmakwụkwọ iji kwalite mgbake na nkwado uto na njem azụmahịa.
ATM ga-arụ ọrụ dị mkpa na izu njem nke Arabian, ememe nke ihe omume a raara nye ndị ọkachamara njem si n'akụkụ ụwa nile, iji kwado na ịkpụzi mgbake nke ụlọ ọrụ njem njem Middle East, site na ihe ngosi, nnọkọ, nchịkọta nri ụtụtụ, onyinye, mmalite ngwaahịa na ihe omume netwọk.
Banyere Ahia njem Arabian (ATM)
Arebia Travel Market (ATM), ugbu a na afọ 29th, bụ onye isi, njem mba ụwa na ihe nlegharị anya na Middle East maka ndị ọkachamara nlegharị anya na-abanye na ndị na-apụ apụ. Igwe ndọrọ ego 2021 gosipụtara ihe karịrị ụlọ ọrụ ngosi 1,300 sitere na mba 62 gafee ụlọ nzukọ itoolu na Dubai World Trade Center, na ndị ọbịa si karịa mba 140 n'ime ụbọchị anọ ahụ. Ahịa njem ndị Arab bụ akụkụ nke izu njem ndị Arab. #Ideas bịarutere Ebe a
Ihe omume n'ime mmadụ na-esote: Sunday, Mee 8 ruo Wednesde, Mee 11, 2022, Dubai World Trade Center, Dubai.
Arịrịọ arịrịọ gị maka ntuli aka UNWTO na-abịa
Onye ọ bụla na-efega United States kwesịrị inweta...
Mgbakwunye nke ike na Platform Edezi Prime ...
Ndị Briten alọghachila! Ụgbọ elu 16 kwa izu ugbu a n'etiti UK ...
United Airlines: More Jordan, Portugal, Norway na ...
Australia na-emepe ókèala mgbe ọnwa 18 nke COVID gasịrị…
Flightgbọ elu si Milan na Rovaniemi na EasyJet ugbu a
Ụgbọ elu ụgbọ elu Sheremetyevo Moscow na Qatar Airways ...
Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Kacha...
Amachibidoro ire Samsung smartphones na Russia
Jamaica meriri na 2021 World Travel Awards
NASA na-enye nkwekọrịta ọmụmụ ihe bedrest na DLR
Ụgbọ elu London ọhụrụ si New York, Denver, San...
Jamaica na-ewere ọla edo na ọla ọcha na onyinye Travvy